Cleo chaAdryana | Top Slot Site | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
Kana uri kutsvaka mumwe mutambo ane vakadzikama nhamba Online Slot bhonasi zvinhu, ipapo Wish Cleo nokuratidza Evolution Gaming vanofanira kuita. Izvi yekare Egypt-music mavhidhiyo slots unokubvumira kuridza vanosvika matatu nechimwe mutambo zvinhu uye vaviri Free kuruka bhonasi zvinhu. Dzidza zvakawanda pamusoro izvi nokuverenga kusvikira pakuguma.
Kuziva More About The Online Slot bhonasi Features
Sezvambotaurwa pamusoro, Cleo chaAdryana kunouya matatu chawo mutambo bhonasi zvinhu. zvinhu izvi zvose kusashanda pavaidira panguva muzasi mutambo. Une Sands Of Fortune, Add Wild Gwenzi uye Inogadzirisa Wild Gwenzi inoratidza zvinowanikwa ichi Online Slot bhonasi mutambo.
Izvi mutambo slots kunouya 5 Gwenzi uye 25 paylines. Zviratidzo pamusoro Gwenzi zvinosanganisira ankhs, anokosha zvamaoko, scarab zvipembenene uye mutambo wacho Logo (izvi zvose zvakakwirira tsika). Une mwero nokutamba makadhi rine A, K, Q, J, 9 uye 10 (izvi vane yakaderera tsika). The Wild ndiye Cleopatra mambokadzi muIjipiti apo Pararirai ndiyo muIjipiti Pyramid.
Zvino shure zvitsigiro mutambo bhonasi zvinhu. The Sand Of Fortune unokubvumira kutendeutsa ose mukuru-ukoshi chiratidzo pamusoro Gwenzi kupinda chete kumusoro-ukoshi chiratidzo. With ichi, unogona kuwana kuhwina anofambidzana uye multipliers kuti dzakakwirira payouts. The Add Wild Gwenzi rinowanika randomly uye une dzomusango zviratidzo aonekwa Gwenzi kuti uwedzere kuhwina yaunayo. Nyika remake shanu hwokushingaira. payline uye kuwana 500 Mari izvi. Nokuti Inogadzirisa Wild Gwenzi, kusvikira Gwenzi shanu vachava remake pamusoro pavo kuti zvimwe regai iwe uwane Unobata kakawanda.
Kuti chamupidigori kuti Gwenzi zvose zvaunoda uri chokumbofanobata uwandu 30p. Pane urongwa hwokuti yepamusoro vachibhejera zvinhu kuitwa uye vatambi vanogona woisa vachibhejera zvinhu por kuruka yakakwirira sezvo £ 60.
The Free Muruoko rwake anobata chirukiso Feature Of This Online Slot bhonasi Game
Izvi Online Slot bhonasi mutambo kunouya vaviri vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso, zvinoti: Eternal Pfuma Cleo raMwari Parade. Both vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso vari kusashanda pose iwe kunyika kushoma matatu chepiramidhi uparadzire mifananidzo pamusoro Gwenzi.
Uchava kusarudza chimwe kubva vaviri vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso kutamba. Kana wasarudza Wokusingaperi Pfuma vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso, ipapo kutarisira kutamba pakati 5 uye 10 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso. zvisinei, Cleo zvaJehovha Parade achava Cleopatra Wild mifananidzo ukapisa murwi pamusoro vanodzungunyika 5 kukubatsira kumhara kuhwina mubatanidzwa.
With ichi Online Slot bhonasi mutambo, unogona kuva nechokwadi agamuchirwa kwenguva refu yenguva. Mujinga mutambo bhonasi zvinhu, uyewo vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso, kupa vatambi vane mikana vawane Unobata uye rinowedzera payouts dzavo.